KOOFIYADAHAN (Cow-boys) EE MADAXDA KULMIYE U SOO XIDHANAYSO MUJTA MACANUSLIMKA AH WAA ( SECULARISM – Calmaaniyiin). | Oodweynenews.com , Oodweyne News, OODWEYNENEWS
KOOFIYADAHAN (Cow-boys) EE MADAXDA KULMIYE U SOO XIDHANAYSO MUJTA MACANUSLIMKA AH WAA ( SECULARISM – Calmaaniyiin).
Secularism waa in Diinta iyo Dawladda la kala saaraaa oo ay diintu aanay maasaajidda soo dhaafin oo aanay shaqo soo darsan sida wax loo maamulayo. Waatuu beri dhaweyd aa ka maqlayseen mar wasiiiru dawlaha amnigu ma uu ku soo taraaray diinta iyo sheekh Adam Siiro ee uu lahaa ‘ Sheekh Adam Siiro masaajidka siyaasadda ha kala soo baxo oo ha soo galo siyaasadda ‘ wasiirku waa Calmaani.
Wiiggan waxaad arkayseen in madaxda Kulmiye Sool iyo Sanaag ay u sii gashadeen koofiyadihii gaalada ee ‘cow-boy’ ga, Arintaasi waxay ku tusaysaa mabda’ooda calmaaniga ah ee diinta islaamka ka fog weliba sidaasay dad muslim caruurtoodii ‘role model’ ugu noqonayaan oo tusayaan una horkacayaan dhaqanka gaalada weliba cod weydiisanayaan. Dadkiibaba aqoon daro jilbaa gaadhayoo aan odhan karayn waar haddaa wax naga rabtaan bal dhar muslim soo xidha.
Ta kalee xusbiga Kulmiye wadanka la yimi wasiiradii iyo agaasimayaashii sidii isku shaandhayn loogu waday bay dhufaan noqdeen oo way gariirayaan oo mushahaarada yar iyo aqalka iyo gaadhigaa lagaa qaadi baa ku qufulan. Markaa waa inay hadh iyo habeen xusbiga wadani caayaan haddii kale suuqaa la soo dhigayaa. Muse Biixi hadduu Somaliland u madax noqdo dagaalkiisa Togdheer buu ka bilaabayaa u qorshaysan. Dadka indheer garadka iyo xogogaalka way sheegeen in aanuu nin dad isku wadi kara aaanuu shaqo kulahayn.
Shalay markuu (cow-boy)ga iska dhigayey ee uu dharkayn geenyo ka hadlayey wuxuu hadalkiisii ku bilaabay halkani waxaa ku yaalla ‘ xabaalaha Gaanni ,waa habelo ku laayey Isaaqa maantana annagaa haysana weeye’. Markaa Muse hadalkaa inkaari kaga dhacday. Meel waliba taariikhdeeda weji xun iyo mid wacanba way leeday waxay ahayd inuu wax wacan ka sheego ayey ahayd oo dadkana iska iibiyo. Markaa MUSE HOGAAMIYE UMADEED MAAHA laakiin bal boobkan uu sii sheegayo ee uu leeyey dhaartii uun baa ii hadhay haba sameeyasn bal wax ka soo baxaba aynu la aragnee.
Wadanku wadani baa maslacadiisu ku jirtaa oo aniga Muse waa inaadeerkay laakiin waa la eedi doonaa xukunkiisa. Waa ninkaa dhul uu boobay celinla markuu madaxweyne noqdo wuxuu odhan Hotel lada oo dhan anaa leh moolalka anaa leh oo qaadka anaa keenaya waxa kasoo socdaa wax noocaasa oo miidhan. Ta ugu daran ee masixi doonaa waa Diinta iyo Masaajida.